कसले जित्ला साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि ? नेपाल र भारत भिड्दै - Everest Awaj Everest Awaj
- गोरखाली फाइटर जसरी खेलेर जित्छौं : कप्तान चेम्जोङ
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि कसले जित्ला ? यसको छिनोफानो आज हुँदैछ । उपाधिका लागि नेपाल र भारत आज आमनेसामने हुँदैछन् । माल्दिभ्सको मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा हुने फाइनलमा नेपाल र भारतबीच घम्साघम्सी हुनेछ । साफ च्याम्पियनसीपको उपाधि भिडन्त नेपाली समय अनुसार आज राति ८ ः ४५ बजे सुरु हुनेछ ।
नेपाल र भारत आज आज दुबै उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिदैछन् । चिरपरिचित दुई प्रतिद्वन्द्वी बीचको खेल रोमाञ्चक हुने खेल विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
पाँच राष्ट्र सहभागी राउण्ड रोबिन लिगको आधारमा भएको प्रतियोगितामा भारत शीर्ष स्थान र नेपाल दोश्रो स्थानमा रहेर फाईनलमा पुगेका हुन् । नेपाल साफ इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो । नेपालले आज भारतलाई हराएर उपाधि जिते त्यो ऐतिहासिक हुनेछ । किनकी नेपालले अहिलेसम्म उपाधि जित्नु त परको कुरा, फाइनलको यात्रासमेत तय गर्न सकेको थिएन । तर नेपाललाई उपाधि जित्न त्यति सजिलो हुँदैन । किनकी नेपाल र भारतबीचको खेलमा भारत प्राय ः हाबी हुने गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म साफ च्याम्पीयनसीपको उपाधि ७ पटक जितिसकेको छ । उ आठौं पटक उपाधि जित्न चाहन्छ ।
भारतविरुद्ध नेपालले हालसम्म २२ खेल खेलेको छ । जसमा भारत सँधै हाबी हुँदै आएको छ । नेपाल र भारत बीच भएको २२ खेलमध्ये भारतले १५ पटक जितेको छ । नेपालले हालसम्म दुई खेल जितेको छ भने ५ खेल बराबरीमा टुंग्याएको छ ।
तर नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले आफूहरु उपाधि जित्नका लागि मैदानमा उत्रिने बताउँछन् । कप्तान चेम्जोङले भारतविरुद्ध गोर्खाली फाइटर शैलीमा खेलेर जित्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो लागि ठूलो दिन हो । हाम्रो सबै थोक हो । हामी जितका लागि सबैथोक दिने छौँ । हामी गोर्खाली जसरी खेल्ने छौँ ।’
साफ अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा भारतले नेपाललाई १्० ले हराएको थियो ।
आज हुने खेलमा नेपालका प्रमुख हतियारका रुपमा रहेका विंगर अन्जन विष्ट नहुने भएका छन् । दुई पहेलो कार्डको कारण उनले फाइनल खेल खेल्न पाउने छैनन् । अञ्जनमात्र नभई मिडफिल्डर पुजन उपरकोटीले खेल्ने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । खेलका क्रममा चोटग्रस्त उपरकोटीले खेल्ने सम्भावना कम रहेको हो ।